Sigcina Umzumbe uhlanzekile
Bamukelwe ngelikhulu isasasa abasebenzi ababhekelele ukugcina izindawo zikaMasipala waseMzumbe ezinabantu abaningi zihlanzekile. Lo msebenzi bawuqale ngesonto eledlule ngokuyo bhekelela inhlanzeko endaweni yasoThuthwini esikhumulweni samatekisi kanye nezindawo ezakhele uMtholampilo wasoThuthwini.
UNksz Phumzile Mhlangu obhekele ezemvelo kuMasipala waseMzumbe uthe kunemigqomo emikhulu emine ebekwe ezindaweni ezahlukene eMzumbe, “Sinalemigqomo emine ebekwe ngasesikhumulweni samatekisi oThuthwini, ingaseMnyangweni wezenhlalakahle oThuthwini, isesikhumulweni samatekisi eSt Faiths endaweni ekuthiwa ise Junction kanye naseLuphepheni.” Uqhube wathi lezindawo zikhethwe ngoba zigcwala kakhulu abantu sonke isikhathi njengoba zingama renke kanye nemitholampilo. Ekhuluma nabasebenzela erenke yasoThuthwini uKhansela Thubelihle Mbayi uthe, “Ngiyanxusa ukuthi nisebenzisane nalabasebenzi abazogcina le ndawo ihlanzekile.” Ube esenxusa abasebenzi ukuthi basebenzisane kahle nabantu ababafice erenke. “Umbono wethu njengoMkhandlu waseMzumbe ukuthi sibe ne renki ehlanzekile ebukekayo njengoba sesiqashe abantu abazosebenza belungisa isimo sokungcola kulendawo.
UPhumzile ube esenxusa ukuthi umphakathi uyiphathe kahle le migqomo bangalahli ama battery, opende, izinto eziyimithi yasemitholampilo, izinsimbi, izilwane ezifile, ukungcolo okuphuma kwakhiwa. UNksz Mhlangu uphethe ngelithi kungekudala bafisa ukuba neloli eliqoqa udoti, “Kodwa loko kuyokwenzeka eminykeni ezayo uma ukhula lo mnyango wokuqoqwa kukadoti.”